Black Magic: Facebook Hacking (Eng Version) [7.17 MB]
Facebook Hacking (Eng Version) [7.17 MB]
Posted by Black Magic | Posted in Books , Facebook Hacking | Posted on 2:39 PM
ခရီးသွားတာ နဲနဲကြာသွားတယ်ဗျာ...၊ Jelly Kit နဲ့လည်း မတွေ့ရတာကြာပြီဆိုတော့ သူနဲ့ပဲအချိန်ဖြုန်းနေတာ.. Blog ကို လှည့်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်..၊ ပြန်ရောက်တာတော့ တနေ့က ထဲက...၊ ဒါပေမယ့် ခရီးပမ်းလာတာ ရော ပျင်းတာရောနဲ့ နားနေတာ..၊ ဒီနေ့တော့ တင်မှဖြစ်မယ် ဆိုပြီး တင်ပေးလိုက်တယ်..။
ကဲ .. ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Myanmar Youth မှာတင်ထားတဲ့ Facebook Hacking ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ...၊ မူရင်းအတိုင်းပဲပြန် Share ထားပါတယ်...၊ ကျွန်တော်ကတော့ Hacking နဲ့ ပါတ်သက်တာ မသိတဲ့အတွက် စမ်းမပေးနိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်...၊ ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ နည်းလမ်းတွေက Update ဖြစ်မဖြစ်မသိပေမယ့် Hacking ဆိုတာကို နည်းပညာ တစ်ခုအနေနဲ့ သိထားအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ..၊ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကတော့.....
1. Facebook Tips & Tricks
1.1 Facebook Tips
1.2. How to find Facebook Number
1.5. How to download Facebook in your PC…
1.10 Export Email addresses of your Facebook account
1.16. Facebook antivirus
1.17. How to alert Facebook fan page in your E-mail…
1.18. How to Show who is online on Facebook when you are in offline mode…
1.19. How to send SMS using Facebook…
1.24. Colored text, bold, underline, smiles in Facebook status…
1.25. How to disable Facebook Timeline…
2.14. Online Face book Messenger…
2.15. How to Analysis Facebook Fan page…
4.3. Web browser Pass view …
4.6. How to delete Your friend Account within 24 hour
စတာတွေလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်... ကျွန်တော်တော့ဘာမှမသိဘူးနော် ....:P
Download with Sharebeast downloader ဆိုတဲ့ဘေးက အမှန်ခြစ်လေးကိုဖြစ်ပြီးမှ
သူ့အပေါ်က Download Button ကိုနှိပ်ပြီး Down ပါ...၊)